प्रविधि Archives - Eall Nepal
कयौं पटक सम्झन खोज्दा पनि वाइफाइको पासवर्ड सम्झिन सकिएन भने केहि विधि अपनाएर सहजै राउटरको पासवर्ड पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो पासवर्ड सामान्य फर्म्याटमा देख्न सकिन्छ जसलाई प्रयोगकर्ताले सहजै पढ्न सक्दछन्। यो पासवर्ड आफ्नो पर्सनल वाइफाई ...
विश्व जगतमा प्रबिधीमा फड्को मार्दै, यी मोबाईलहरु जस्लाई घाम पानी देखी धुलोले कुनै असर नगर्ने, सबैको जानकारीका लागि सेयर गरौ
यो जमना नै स्मार्ट छ । त्यसैले सबैका हातहातमा स्मार्ट मोबाइल देखिन्छ । स्मार्ट मोबाइल धेरैका लागि अत्यावश्यक नै भइसक्यो । किनभने प्रविधिको यो जमनामा स्मार्ट मोबाइलबाटै धेरै काम गर्न सकिन्छ । तर, बजारमा स्मार्ट ...
बिश्वमा सबैभन्दा तहल्ला मच्चाई आफ्नै राज गर्न सफल केही ब्राण्डको बारे जानकारी लिनुहोस, को छ त सबै भन्दा टप मा ?
विश्वका ठूला प्राविधिक कम्पनीहरूले विगतका केही वर्षयता मनग्गे नाफा र बढ्दो बजार मूल्यका कारण धेरै शक्ति आर्जन गर्न सफल भएका छन् । एप्पल (फोन), गुगल (सर्च इन्जिन), माइक्रोसफ्ट (सफ्टवेयर), फेसबुक (सामाजिक सञ्जाल) र अम्याजोन (अनलाइन बजार) ...
बिजशाला काठमाण्डौ । विश्वभर शहरीकरण तीव्र भएसँगै अर्बान फार्मिङको चलन निकै बढ्न थालेको छ । घरको छतमा, पार्किङ एरिया वा कुनै खालि ठाउँको प्रयोग गरी सागसब्जीको खेती गर्न थालिएको छ । यस्तो काम एक खास ...
फेसबुकमा बुष्ट गरी डलर कमाउने हरुका लागि दुखद खबर ! यस्तो नयाँ नियम ल्याउदै छ फेसबुकले …
न्युयोर्क – सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले विश्वसनीय समाचारलाई मात्रै प्रवर्द्धन (बुस्ट) गर्ने भएको छ। फेसबुकका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकुरबर्गले न्यूज फिडमा पूर्ण विश्वसनीय समाचार स्रोतलाई प्राथमिकता दिइने घोषणा गरेका छन्। ‘जुन भरोसायोग्य छ ...
कहिले सम्म चल्छन त केवल रहित डिजिटल टेलिभिजन ?
काठमाडौँ । एनालग प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकभर डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गराउने सरकारी कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक लगाउने सरकारी कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका लागि तोकिएको पेसी निरन्तर सर्दै गएका कारण ...
एजेन्सी। के घरमा बत्ति बाल्न विद्युत ग्रीडको सट्टा आलुको प्रयोग सम्भव छ? अनुसन्धानकर्ता राबिनोविच र उनका सहयोगी अघिल्ला केही वर्षदेखि यसैलाई प्रोत्साहित गर्दै छन। सस्तो धातुको पाता, तार र एलइडी बल्ब जोडेर यस्तो बत्ति बालिन्छ ...
तपाई बसेको वरिपरि वाइफाई को सिग्नल छ यो तरिका बाट पत्ता लगाउनुहोस पासवर्ड ; तरिकासहित …
यसरी लुकाएर राखिएको हुन्छ वाइफाईको पासवर्ड, सजिलै ह्याक गर्ने तरिका सिक्नुहोस… अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने ...
तपाईको मोबाईल पानीमा खसे रिपेयरिङ सेन्टर जानै पर्दैन ; अब यसो गर्नुहोस्..
मोबाइल पानीमा झर्यो ? अब यसो गर्नुहोस, रिपेयरिङ सेन्टर जान पर्दैन हामी सबैलाई , आफनो फोन आफु भन्दा पनि प्यारो छ । तर १ मिनेटको लागी सोचेर हेर्नुस , तपाईको फोन पानीमा खस्यो वा पानीमा ...
आर्थिक, प्रविधि, विश्व, समाचार
मलेसिया र सिंगापुर जोड्नका लागि उच्च गतिको रेल निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । यी दुई देशबीच बहुप्रतिक्षित यस रेल सम्झौतामा अब चाँडै नै सम्झौता हुने जानकारी यसअघि देखि नै दिइएको थियो । ...